BADEECADA UGU ISBEDELKA BADAN
Akhri Warbixinta Gaarka ah ee Saliida FXPRIMUS
Saliiddu waxay ku jirta bartilmaameedka ugu cad dhamaan sannadka 2017, halkaas oo dahabka madow uu gaadhay heer sare, oo aan wali la gaadhin 2014. Akhri wax dheeraad ah
Ganacsiga Saliida Online ka ah
Kula Ganacso SALIIDA mida kamida ah adeeg bixiyayaasha ugu aaminka badan ee tamarta iyo ganacsiga badeecadaha. Ganacsatadayada saliiddu waxay doortaan inay ku ganacsadaan iyagoo adeegsanaya barnaamijka ganacsiga ee Metatrader 4 – oo si sahlan loogu yaqaanno barnaamijka MT4 – si ay u furaan una xidhaan ganacsigooda. Isdiwaangali maanta oo hel qalabyo waxbarasho oo tayo iyo tiro leh, oo kaa caawinaya safarkaaga ganacsiga! Furo akoonkaaga ganacsi ee live ah, ogow wax badan oo ku saabsan qiimayaasha hoose ee crude oil iyo spot oil, oo qorsheyso talaabada xigta ee ganacsigaaga, maanta!
Maxaa looga ganacsadaa Dahabka Madow (Black Gold)
Dhaqdhaqaaqa qiimayaasha saliida cayrin ayaa saamayn balaaran ku leh aalado badan, ay ku jiraan indexes, saamiyada, lacagaha iyo badeecadaha kale maadaama SALIIDU tahay isha tamareed ee ugu wayn caalamka oo idil. Sababtaas daraadeed suuqyada Saliiddu waxay noqon karaan kuwo isbeddello ah oo abuuri kara ruxitaano ballaaran. Maalgashadeyaashu waxay fiiriyaan fursadaha kasoo baxa dhimista ama kordhinta wax soo saarka saliida ee ay sameeyaan ururka dawladeedka wadamada ku bahoobay dhoofinta saliida ee OPEC iyo sidoo kale heerarka alaabada (inventory levels) . Dalabyadu waa kuwo sarreeya inta lagu gudo jiro bilaha xagaaga iyo jiilaalka, waxa laga yaaba tani inay tahay wakhti fiican ood kaga samayn karto faa’ido dhaqdhaqaaqyada qiimaha. Saliidu waxay xidhiidh caksi ah la leedahay lacagta doolar, waxayna si dhaw u dhaqaajisa suuqa saamiyada, sidaa awgeed fursado ayaa kasoo bixi karo suuqyo dhawr ah.
FXPRIMUS waa mid ka mid ah dhowr shirkadood oo caalamiya oo bixiya Spot Oil iyo Futures Oil. Ogow sababta ay macaamiishayadu ugu raaxeystaan ka ganacsiga Spot Oil:
Spot oil ma dhacdo si ka duwan Oil futures, taas oo dhacda bil kasta.
Macaamiishu way kala leexin karaan maalgashiga ganacsigooda iyagoo ka dhigaya isku darka Oil Spot iyo Futures!
Ganacsiga Spot Oil maanta lama caqabado ah aaladaha kale ee CFD.
Sawir Farsamo oo USOIL ah
Faa’iido ee FXPRIMUS